काठमाडौं कोरोना महामारीको केन्द्र बन्ने संकेत : कहाँबाट ल्याउने भ्याक्सिन ? « Rara Pati
काठमाडौं कोरोना महामारीको केन्द्र बन्ने संकेत : कहाँबाट ल्याउने भ्याक्सिन ?
१० भाद्र, काठमाडौं । नेपाल सरकारले पछिल्लो अवधिमा काठमाडौंमा भित्र भित्रै तीब्र रुपमा फैलिरहेको कोरोना साइकल ब्रेक गर्न निषेधआज्ञा जारी गरेको छ । आजसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमित ३४४१८ मध्ये १७५जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
आज मुलुकभर ८८५ जना संक्रमित थपिदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ३०१ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौंमा २३०, ललितपुरमा ४७ र भक्तपुरमा २४ जना संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकभर संक्रमण र मृत्युदर दुबै बढिरहेको अवस्थालाई सामान्यरूपमा आकलन गर्न पक्कैपनि मिल्दैन । १० हजार भन्दा बढी सक्रमित भइसकेको हुनसक्ने अनुमान आइरहदा यो निषेधाज्ञाले संक्रमणको तिब्रतालाई न्यनिकरण गर्न मद्दत त गर्ला । तर चिसो सुरु भएसँगै यो संक्रमण अझ बढ्न गई पुन तीब्रता लिन सक्दछ ।
विश्वब्यापी भ्याक्सिन निर्माणको कार्य तिब्रतापूर्वक चलिरहेको सन्र्दभमा रुसले आफ्नो भ्याक्सिन सफल भएको दावी गरेको छ । उसले अब डाक्टर तथा शिक्षकबाट यो लगाउन सुरु गरिसकेको छ । अमेरिका लगायतका देशले रुसी भ्याक्सिनबारे प्रश्न उठाए पनि यो भ्याक्सिन बिभिन्न देशले प्रयोग गर्न चासो राखिरहेका छन् । स्वयम् रुसी राष्ट्रपति पुटिनले यो भ्याक्सिनको विश्वसनियता दिलाउन आफ्नो छोरीले समेत प्रयोग गरेको कुरा बताइसकेका छन् ।
चीनले समेत भ्याक्सिन प्रयोग गर्न सुरू गरिसकेको कुरा समाचारमा आएको छ । नेपाल सरकारले पनि रुस, अक्सफोर्ड, चीन लगायतका मुलुकले तयार गरेको भ्याक्सिन आफ्नो देशमा परिक्षण प्रयोग गर्न दिने र यसका लागि सम्बन्धित देश र कम्पनीलाई आमन्त्रण गरि प्रत्र पनि लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही समयभित्र भारतले पनि भ्याक्सिन तयार गर्न गइरहेको कुरा स्वतन्त्रता दिवसको सन्र्दभमा उल्लेख गरेका थिए । भारत भ्याक्सिन बनाउन सफल भएमा बंगलादेशलाई भ्याक्सिन दिने कुरा बताएको छ ।
नेपाल र भारतबीच केही समयदेखि देखिएको तिक्तताका कारण पनि नेपाललाई भारतीय भ्याक्सिन पहुँच पक्कै सजिलो हुने देखिदैन । त्यसमाथि भ्याक्सिन छिटै बनाउने कुरामा भारत कति सफल होला भन्न सकिदैन । भारतमै कोरोना तिब्र रूपमा फैलिरहेको छ । अझ एक अनुमान अनुसार त करिव २६ प्रतिशत जनसंख्यालाई कोरोनाले गाँजेको या गाँज्न सक्ने सर्वेक्षणहरु पनि गरिएका छन् । त्यसैले भारतभित्रै भ्याक्सिनको ठूलो माग हुने देखिन्छ जबकी आपुर्तीको अवस्था अझै निश्चित छैन ।
यस्तो अवस्थामा नेपालजस्ता देशलाइ भ्याक्सिनमा पहुँच चुनौतीपूर्ण हुन सक्दछ । नेपालले रुस र चीनसँग भ्याक्सिन पहुँच सुनिश्चितताका लागि कुरा गर्नु आवश्यक छ । काठमाडौं लगायतका कोरोना भयाभव हुदै गरेका क्षेत्रहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरु र फ्रन्टमा काम गर्ने कामदारलाई लक्षित गरी आवश्यक भ्याक्सिन अर्डर अहिल नै गरेर छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।